u-Elgar ushaye ikhulu lesishagalombili ngaphambi kokuthi i-England inqobe ngama-runs angu-239
u-Dean Elgar uhlanganise ikhulu lakhe lesishagalombili kanye nelesithathu onyakeni ukulondoloza okuzokwenzeka ngaphambi kokuthi i-England inqobe umdlalo wesithathu we-Test bedlala nama-Standard Bank Proteas ngama-runs angu-239 e-The Oval e-London ngoMsombuluko kunesikhathi esiningi esisele kanye nama-overs.
u-Elgar uyena ohamba phambili kwikhilikithi yama-Test kulonyaka (762 nge-average engu-50.80) futhi isikhathi eside kubukeke sengathi angaphinda lokhu akwenza edlala ne-England ekhaya njengoba adlala umdlalo wonke e-Sahara Stadium Kingsmead.
Bekungafanele, kodwa, ube umuntu wesishagalombili ophumile ngo-136 (228 balls, 20 fours) futhi ukuphuma kwakhe kucacise ukuphela kwe-innings njengoba ekhishwe u-Moeen Ali ngebhola lokuqala le-hat trick ukuqeda umdlalo.
u-Elgar uqale wahlanganisa i-partnership engama-runs angu-108 nge-wicket yesihlanu no-Temba Bavuma ngaphambi kokuthi u-Bavuma (32 off 97 balls, 2 fours) kanye no-Vernon Philander baphume ngebhola lokuqala, besekusele kancane ukuthi kuphele.
u-Ali (4/45) uphose kahle kwi-England kwathi u-Toby Roland-Jones waqeda enama-wicket ayisishagalombili emdlalweni wakhe wokuqala.
i-England isingaphambili ngo-2-1 kule-series enemidlalo emine, umdlalo wokugcina uzodlalelwa e-Old Trafford kusukela ngoLwesihlanu. i-England isiyigcinile i-Basil D’Oliveira Trophy abayinqoba e-South Africa ngonyaka odlulile.
Umdlali we-England, u-Ben Stokes ubizwe nge-Man of the Match ngekhulu lakhe le-innings yokuqala kanye nokuphosa i-spell esihle ngobusuku besine.
uElgar ujabulela ukuhola iNgilandi inqobe isimanga somdlalo namaProteas AmaProteas aveze ikhono kumaT20 uAmla noDe Kock bavele bazenzela uStokes uzenzele osukwini lokuqala